Luyintoni olu luThengiso lweMarike yezeMali kunye nendlela yokuRhweba ngalo ngoJanuwari 2022!
Yintoni iMakethi ye-Forex kunye nendlela yokuthengisa ngayo ngo-2021
Imarike ye-forex mhlawumbi yenye yezona zaziwa kakhulu emhlabeni. Ngenxa yoko, kukho amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi abathembisa inyanga kwinduku kubathengisi bemali.
Inyani yile yokuba uninzi lwala mabango asendle eefemu zabarhwebi abanakho ukubonelela ngokuphila ngokulula kubarhwebi abanasiseko. Akukho ndlela elula yokufumana ubutyebi kurhwebo, kwaye akukho ndlela ingenamngcipheko wokuyenza.
Nangona kunjalo, ngokufunda imakethi ye-forex ngokuqinisekileyo ume ithuba elingcono kakhulu lokuba uphumelele, kunye nokwenza izigqibo ezizizo ngokusekwe kuphando kunye nezikhokelo zokufunda ezinje ngezethu.
Kungathatha iinyanga okanye iminyaka ngexesha lokuqonda ngokupheleleyo imakethi, kwaye kukho iindlela ezimfutshane (oko kukuthi) njengemiqondiso kunye neerobhothi - zonke ezo siza kuthi sizigubungele ngakumbi kwesi sikhokelo kwimarike ye-forex.
Kweli phepha, siza kuxoxa ukuba yeyiphi imakethi ye-forex kunye nendlela onokuyithengisa ngayo. Siza kuphinda sihlolisise indlela yokungena kunye nomthengisi omangalisayo, iintlobo zeodolo zangaphambili, iifizi zokulindela, kunye neendlela zokuzama kunye nokuvavanywa zokukunceda ukunciphisa umngcipheko wokuthengisa kwangaphambili.
Yintoni iMakethi ye-Forex?
Imarike ye-forex yintengiso 'yelinye ilizwe' (okanye i-FX) - ongathandabuzekiyo ukuba uvile ngayo. Nangona kunjalo, egameni lokucaca-intengiso ye-forex yindawo yentengiso yehlabathi apho iimfumba zabatyali-mali, abarhwebi, iibhanki, iihedge fund kunye nabatyali zimali abathengisayo bathenga kwaye bathengise iimali ngosuku.
Abantu batshintsha iimali ngokuchasene 'njengesixa sokutshintshiselana' - umzekelo i-GBP / iUSD (iiponti zaseBritane / idola yaseMelika). Olu nikezelo kunye nemfuno inyanzelisa kuthenga Ixabiso kunye thengisa Ixabiso lesibini semali kwaye liyanceda ekuququzeleleni ukhenketho lwamazwe aphesheya kunye nentengiso- kunye nokuzinzisa iimarike.
I-Forex ingasetyenziselwa ukukhusela amanqanaba emali kunye neemali zamanye amazwe. Iindlela ezidumileyo zokurhweba nge-forex zisebenzisa ii-ETFs, iikhontrakthi zokhetho, ukusasaza ukubheja, iikontrakthi zexesha elizayo kunye neeCFD.
Ukunyusa kungasetyenziswa kwii-CFD ze-forex ukuya kuthi ga kwi-1: 30 kwizibini eziphambili ze-FX, kunye ne-1: 20 kwizibini ezingezizo ezinkulu zeFX. Siza kugubungela ngababini, amandla kunye nayo yonke into ephakathi kweli phepha.
Isiseko seNtengiso ye Forex
Ngoku ukuba unethemba lokuqonda okucacileyo malunga nokuba yintoni intengiso ye-forex, singangena kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela yokuthengisa ngayo. Masiqale ngezinto ezisisiseko zemarike ye-forex, ebandakanya ukuthengisa ngababini kunye neeodolo ezahlukeneyo zorhwebo.
Iipaneli ze-Forex zesiko
Ukuba unomdla ekuthengeni nasekuthengiseni iimali, uya kudinga ukwazi ukuba zeziphi izibini eziya kubakho ukuze uthengise. Nangona oku kuya kuxhomekeka kwinto oyinikwa ngumthengisi wakho okhethiweyo, kubalulekile ukuba ungene kwiimarike ze-forex amehlo akho evulekile.
Oku kuyakunceda ukuba uqonde ukuba zeziphi izinto ezinokubekwa phambi kwakho, kwaye zikuncede ufumanise ukuba zeziphi izinto onomdla kuzo zokurhweba ngaphambili.
Isibini ngasinye semali siza nezinga lotshintshiselwano. Ngokwendalo yentengiso ye-forex, eli zinga liya kutshintsha kulo lonke usuku lokurhweba - kuxhomekeke kunikezelo nakwibango leasethi. Umbono kukuzama ukuqikelela ukuba ucinga ukuba ixabiso lesibini seFX liza kunyuka okanye liwe- kwixesha elifutshane.
Masithi uthathe isigqibo sokurhweba nge-Euro ngokuchasene nedola yaseMelika
Kwihlabathi le-forex, esi sibini siboniswa njenge-EUR / USD
Ixabiso ngexesha lokubhala li-1.17
Injongo yakho kukuqikelela ukuba inqanaba lotshintshiselwano lwezibini ziya kunyuka ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe-1.17
Siza kugubungela iiodolo zorhwebo lwe-forex ngeenkcukacha ezithe kratya kungekudala. Okokuqala, makhe sixoxe ngezi zigaba zithathu zahlukeneyo zezibini zangaphambili. Ngokwesiqhelo uyakubona ukuba iindidi zemali ezahlulwe zaziindidi - ezinkulu ngababini, encinci ngababini kunye -ngaqhelekanga ngababini.
Siza kuqala ngokuthetha ngezona zibini zithengiswa kakhulu zeFX emhlabeni majors.
Iibini ezinkulu zenziwe ngedola yaseMelika kunye nenye imali enkulu- njenge-Euro, iponti yaseBritane, idola lase-Australia, okanye i-yen yaseJapan. Isizathu sokuba zonke izibini eziphambili zeFX ziqulathe i-USD kukuba idola yaseMelika 'yiankile' (okanye igcinwe) imali yehlabathi.
Eminye imizekelo yeemali eziphambili zemali zilandelayo:
I-EUR / USD (i-Euro / idola yaseMelika)
I-GBP / USD (iponti yaseBritane / idola yaseMelika)
I-USD / CHF (idola yaseMelika / iFranc yaseSwitzerland)
I-USD / JPY (idola yaseMelika / yen yaseJapan)
Musa ukukhohliswa ngegama, izibini ezincinci ze-forex zikude kakhulu ngokungabalulekanga. Ngapha koko, ezi zibini zithengiswa kakhulu kwimarike ye-forex kwaye ziya kuhlala zine-2 majors ezinje ngeemali ezichazwe apha ngasentla.
Yintoni iiseti abantwana ngaphandle kwe majors kukuba ezi zibini azinakuze zibandakanye idola yaseMelika.
Nceda ubone apha ngezantsi umzekelo wezibini ezincinci:
I-EUR / GBP (i-Euro / iponti yaseBritane)
I-EUR / AUD - (i-Euro / idola yase-Australia)
I-GBP / JPY (iponti yaseBritane / yen yaseJapan)
I-CHF / JPY (i-Swiss franc / iJapan yen)
I-NZD / JPY (idola yaseNew Zealand / yen yaseJapan)
I-GBP / i-CAD (iponti yaseBritane / idola yaseCanada)
Uninzi lwamaqonga orhwebo luya kuba neepali zemali zangaphandle ezikhoyo. Kulabo abangaziyo, ezi zibini ziya kuhlala zenziwa inye ezinkulu Imali yeFX, kunye nemali enye evelayo.
Iimarike ezikhulayo ziquka i-peso yaseMexico, i-lira yaseTurkey, i-baht yase-Thai, i-peso yase-Uruguay, kunye nokunye. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izibini ze-forex ezingaqhelekanga zihlala zinokuguquguquka ngakumbi kunezibini zemali ezichazwe ngasentla, kwaye ngenxa yoko ziya kuthi zisasazeke ngokubanzi. Siza kuxoxa ngokusasazeka ngokweenkcukacha kungekudala.
Nazi iindidi zemali ezingaqhelekanga oza kukwazi ukurhweba ukuba umthengisi uzinika:
I-EUR / TRY (i-Euro / iTurkey Lira)
I-JPY / NOK (i-Yen yaseJapan / i-krone yaseNorway)
I-GBP / ZAR (iPound Sterling / yoMzantsi Afrika yeRandi)
I-USD / THB (i-US Dollar / iThailand ye-Baht)
I-AUD / MXN (IDola yase-Australia / i-Peso yaseMexico)
Qaphela: Ungaqaphela kuluhlu olungentla ukuba i-krone yaseNorway ihlelwe njengombhangqwana ongaphandle. Nangona kuyinyani ukuba i-krone ixhaswe sisakhelo esomeleleyo soqoqosho, imali ngokwayo ayifuni kakhulu kwinqanaba lehlabathi.
Ukuba umtsha kuthengiso lwemali, kunokuba bhetele ukuba unamathele encinci kwaye ezinkulu ngababini lwemali. Ngale ndlela ubuncinci unokufikelela ekusasazeni ngokungqongqo ukugcina iindleko ziphantsi- ubuncinci de ube uqinisekile ukuba ufunde i-ins kunye nokuphuma kwintengiso ye-forex. Ukongeza koku, ii-majors kunye nabantwana abancinci bezinto ezinqabileyo kune-exotic. Kananjalo, zifaneleke ngakumbi kwii-newbies.
Ukuqonda ii-Orders zeNtengiso ye-Forex
Ngoku ekubeni sixoxe ngeendidi ze-forex, kufuneka sihlolisise kwii-oda ezahlukeneyo. Ii-odolo ziyinxalenye ebaluleke kakhulu yorhwebo- ngaphandle kwazo, umrhwebi wakho ngekhe azi ukuba sithini isikhundla sakho ofuna ukusenza kwisibini esikhethiweyo se-forex.
Thenga kwaye uthengise ii-Orders ze-Forex
Xa uthe wagqiba ukuba yeyiphi i-forex ofuna ukuyithengisa, kuya kufuneka uzame ukuqikelela ukuba leliphi icala olindele ukuba lihambe ngexabiso lesibini.
Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba kuya kufuneka ubeke i kuthenga order okanye a thengisa Umyalelo. Nceda ubone apha ngezantsi umzekelo wendlela ogqitywe ngayo lo myalelo:
Khawufane ucinge ukuba urhweba nge-GBP / USD
Ucinga ukuba ixabiso langoku lesi sibini liya kunyuka
Unoko engqondweni, ubeka i kuthenga Uku-odola kumthengisi wakho
Kwelinye icala, masithi uyakholelwa ukuba i-GBP / USD izakuhla ngexabiso
Kule meko, kuya kufuneka wenze ifayile ye- thengisa umyalelo
Yiyo leyo. Isikhundla sakho siya kuhlala de uphume kurhwebo lwakho. Umzekelo, ukuba ubeke i kuthenga iodolo- kuya kufuneka uvale urhwebo lwakho ngokwenza ifayile ye- thengisa umyalelo.
Imida yokuNciphisa kunye neeMiyalelo zeNtengiso
Imiyalelo elandelayo kuluhlu lwethu yile umda iiodolo kunye imarike imiyalelo. Eli lixabiso apho ungathanda ukungena kurhwebo.
Masiqale ngokukunika umzekelo wokuba ungayisebenzisa nini umda umyalelo:
Masithi uthengisa i-EUR / USD
Ixabiso okwangoku li-1.10
Nangona kunjalo, awufuni ukungena kurhwebo lude lufike kwi-1.12
Unoko engqondweni, uyila umda Umyalelo we-1.12
Umrhwebi wakho uya kuwuphumeza lo myalelo xa i-EUR / USD ilibetha elo xabiso.
Ngoku, masibonise indlela i imarike Umyalelo uyasetyenziswa:
Masithi i-EUR / USD ine kuthenga Ixabiso le-1.15
Ufuna ukuba i-odolo yakho yenziwe ngokukhawuleza ukuze ubambe ithuba lokurhweba elifutshane
Kananjalo, umrhwebi wakho uya kuyenza iodolo yakho kwixabiso elilandelayo elikhoyo
Kule meko, iodolo yakho iya kwenziwa ngexabiso elingentla okanye elingaphantsi kwe-1.15
Kungenxa yokuba amaxabiso eperi yemali ahamba kwisibini ngomzuzwana
Llinganisa ii-odolo, ngakumbi, zisetyenziswa ngabarhwebi abanamava rhoqo. Isizathu kukuba ungangena kwindawo ngexabiso elikhethiweyo.
Ngokulula, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwe kuthenga Ixabiso kunye thengisa Ixabiso lesibini semali. Kubalulekile ukuba uqonde ngokuqinileyo ukuba yintoni 'ukusasazeka', njengoko izakuchaphazela ukuba ingakanani inzuzo onakho ukuyenza kwimizamo yakho yorhwebo.
Ngenxa yoko, amaqonga orhwebo aza kukubonisa amaxabiso amabini ahlukeneyo xa ucaphula isibini semali- the kuthenga ixabiso, kunye thengisa ixabiso. Umahluko phakathi kwala maxabiso ubonakalisiwe 'iipipi'. Siza kugubungela iipips ngokweenkcukacha ezizayo, ukucima inkungu. Emva kwayo yonke loo nto, xa urhweba kwimarike ye-forex uza kubona igama elithi iipips kakhulu.
Nangona kunjalo, ukusasazeka yindlela umrhwebi wakho aza kuyenza ngayo imali yokubonelela ngenkonzo. Oku ikakhulu kunjalo ngamaqonga orhwebo ngaphandle kweekhomishini afana ne- Skilling, Capital.com kunye ne-eToro.
Nceda ubone apha ngezantsi umzekelo wendlela osasazeka ngayo umsebenzi, usebenzisa urhwebo lokucinga:
Uthengisa i-EUR / USD
Umrhwebi wakho ucaphule kuwe kuthenga Ixabiso le-1.1718
The thengisa Ixabiso li-1.1716
Ukusasazeka kwi-EUR / USD kunjalo 2 iipipi
Ukuze uqhekeze-kurhwebo lwakho lwe-EUR / USD, kuya kufuneka uzuze iipipi ezimbini-nantoni na engentla ongayibala njengenzuzo.
Njengoko ubona kumzekelo wethu, ukusasazeka nakweyiphi na isibini kuthetha ukuba uqala urhwebo 'kubomvu' ukuze uthethe. Ke apha, uya kuba ziipipi ezimbini ezibomvu. Kuyafana xa uphuma kurhwebo.
Sitshilo ukubaluleka kokusasazeka kwaye ndikuxelele ukuba kwintengiso ye-forex ilinganiswa kuyo iipipi. Ngoku makhe siqhubeke sichaze ukuba yintoni iipipi ngokwenene zinjalo. Iipips zibalwa njani iinguqu zokutshintsha kwemali. Sichazile ukuba oku kungatshintsha kwisibini-nge-yesibini.
Usenokuba uqaphele ukuba kumzekelo wethu ongentla sasaza sikubonise i-EUR / USD njengeendawo ezi-4 zokugqibela. Kungenxa yokuba yindlela amaxabiso eFX anamaxabiso ngayo kwindalo iphela. Ke, endaweni ka-1.17 ngokomzekelo, uya kucatshulwa u-1.1718 (usebenzisa imeko yethu apha ngasentla).
Masikunike umzekelo wendlela iipipi ezinokuluchaphazela ngayo urhwebo, usebenzisa i-GBP / USD njengebini lethu:
I-GBP / iXabiso lixabisa kwi-1.3013
Iiyure ezingama-2 kamva, isibini esinye sixabiswa nge-1.3003
Ixabiso le-GBP / USD liwile 10 iipipi
Masithi isibonda sakho sasiyi- $ 100
Ilahleko yakho okanye inzuzo iya kuba yi- $ 1,000 ($ 100 x 10 iipipi)
Kukho umahluko kuninzi lwemithetho ebomini, kwaye xa kufikwa kwizibini ze-forex ezicatshulwe kumanqaku ama-4 edesimali-ngaphandle kwe-yen yaseJapan. I-JPY ngamanani ama-2 emva kwedesimali- umzekelo; 104.72.
Ulawulo lweNgxowa-mali yoRhwebo kunye neeNjongo
Ukujolisa kulawulo lwakho lwebhanki kuya kukonyusa ubuchule bakho bokurhweba kwaye kukuncede ukhule njengomtyali mali. Xa kuziwa ekunciphiseni umngcipheko kunye nokulawula imali yakho ngcono, kukho iiodolo ezithile kunye nezixhobo ezinokubaluleka kubathengisi be-forex.
Masiqale ngokujonga indlela amandla okudlala angadlala ngayo inxaxheba kuthengiso lwakho- kunye nendlela onokuwusebenzisa ngayo umda wokulimala ngohlobo stop-ilahleko kwaye Thatha inzuzo iiodolo.
Ukunyanzeliswa yinxalenye ebaluleke kakhulu yokurhweba kwimarike ye-forex kubathengisi abaninzi abanamava. Ukucacisa, oluxhathisayo Inikezelwa luninzi lweendawo zokurhweba ngaphambili kwaye ikwenza ukuba urhwebe ngemali engaphezulu kuneyona unayo kwiakhawunti yakho.
Masicacise ngakumbi -Ukuphakama kufaniswa nemali mboleko. Ukuphakama komyinge wakho kukuba, inzuzo yakho inokuba ngaphezulu- kunjalo, kwelinye icala ingqekembe yeyokuba ilahleko yakho inokuba nkulu kakhulu.
Xa kuziwa kwi-forex, abathengisi abanamaphepha-mvume bavunyelwe kuphela ukubonelela abathengi beentengiso e-UK, eYurophu, kwaye kungekudala beza kuba yi-Australia (okuthetha ukuba ayingobungcali) 1:30 kwi ezinkulu Izibini zeFX, kunye no-1: 20 kuqhubeke iziyobisi kwaye abantwana.
Masikunike umzekelo osebenzayo wendlela osebenza ngayo:
Ixabiso langoku kwesi sibini yi-1.3520
Une- $ 500 eseleyo kwiakhawunti yakho yorhwebo
Uyila kuthenga Umyalelo usebenzisa i-1: 30
Iiyure ezi-4 kamva i-GBP / i-USD yi-1.3790
I-GBP / i-USD ibone ukunyuka kwe-2% ngexabiso
Uhlawula imali yakho ngokwenza inzuzo ngokwenza thengisa Uku-odola kumthengisi wakho
Ukuba awusebenzisanga ubungakanani, olu rhwebo beluya kukwenza ube yi- $ 10 ($ 500 + 2%). Nangona kunjalo, ngenxa yokuba usebenzise umyinge we-1: 30 inzuzo yakho iphindaphindwe. Kananjalo, inzuzo yakho iyi- $ 300 ($ 10 x 1:30).
Njengoko besichukumisile, ukusebenzisa amandla okunyusa kufanele ukwenziwa ngononophelo njengoko kunokwandisa iilahleko zakho kanye. Kulapho stop-ilahleko kwaye Thatha inzuzo iiodolo zinokufumaneka ngokufanelekileyo.
Ukunciphisa umngcipheko: Imiyalelo yokuPhulukana neLost-Stop
Ngokunamathela kuthi ukuza kuthi ga ngoku kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo kweeodolo ezinje kuthenga kwaye thengisa, imarike kwaye umda iiodolo.
Ngoku, ngokwemiqathango yokulawula imali yakho yorhwebo - stop-ilahleko Imiyalelo ikuvumela ukuba ube nakho ukuphuma kurhwebo lwakho kwindawo emiselwe kwangaphambili-ukuthintela nayiphi na ilahleko engaphaya.
Uya kubona ngezantsi umzekelo wokuba stop-ilahleko iodolo inokusetyenziselwa urhwebo lwe-forex:
Masithi uthengisa i-CAD / AUD
Uthatha isenzo a kuthenga Uku-odola ngo-1.0710
Awukulungelanga ukulahlekelwa ngaphezulu kwe-2%
Ngale nto engqondweni, uyila stop-ilahleko Uku-odola ngo-1.0495
Ixabiso le-CAD / AUD lehla nje iiyure ezi-2 kamva ukuya kwi-1.0281
Oku kubonisa ukwehla kwexabiso malunga ne-4%
Umrhwebi wakho wenze into yakho stop-ilahleko Uku-odola ngo-1.0495 ngokomyalelo
Ngokwangoku kungasentla, oku kuthetha ukuba endaweni yokuphulukana ne-4% ulahlekelwe kuphela yi-2%
Vala ngokuzenzekelayo kwiiNzuzo: Imiyalelo yokuThatha iNzuzo
Ngokufana nee-odolo zokuyeka ilahleko, ii-odolo zenzuzo zikuvumela ukuba usete ukujolisa kurhwebo- oko kuthetha. Ngelixa stop-ilahleko imiyalelo ikuvumela ukuba unciphise ilahleko yakho, Thatha inzuzo iiodolo zikuvumela ukuba utshixe kwiinzuzo zakho.
Nanku umzekelo we Thatha inzuzo uku-oda kwenye imeko yokuthengisa:
Xa uhamba ixesha elide kwi-CAD / AUD injongo yakho kukwenza inzuzo ye-4%
Unoko engqondweni, ubeka i Thatha inzuzo Uku-odola i-4% ngaphezulu kwexabiso lesibini
Xa elo xabiso lifikelelwe, umrhwebi wakho uya kuyenza Thatha inzuzo uku-oda ukuba utshixe kwinzuzo yakho nge-4%
akho stop-ilahleko uku-odola kwangoko kuthetha ukuba umngcipheko awukho ngaphezulu kwe-2%, ngelixa yakho Thatha inzuzo Umyalelo uqinisekisile ukuba uyasishiya isikhundla sakho ngokuzenzekelayo xa usenza iipesenti ezi-4 kwinzuzo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokulinganisa umngcipheko wokufumana umyinge xa ​​uthengisa kwiimarike ze-forex.
Ubuninzi beZibonda ze-Forex
Xa ujonga indlela yokulawula ngcono i-bankroll yakho yorhwebo, kuya kufuneka unike ingqwalaselo kwelona xabiso liphezulu obeka kulo umngcipheko kwisikhundla ngasinye. Kulula ukucinga ngale nto njengepesenti endaweni yemali (njengeedola okanye iisenti).
Ukukhanyisa ukukhanya okungakumbi malunga noko sithetha ngako oku-indlela elungileyo yokulawula imali yakho kukufumana nje kuphela ukubangoko unako ukufikelela kuko. Uninzi lwabantu kuluntu lokurhweba lubandakanya oku kwisicwangciso sabo sokurhweba ngokusoloko bebeka iipesenti ezi-1 okanye ngaphantsi kunabo baneakhawunti yabo.
Ukukunika umzekelo, ukuba une-akhawunti eseleyo ye- $ 2,000- ngekhe sicebise ukuba usebenzise ngaphezulu kwe- $ 20 yemali yakho kurhwebo olunye. Kungokwemvelo ukuba iakhawunti yakho yorhwebo iguquke njengoko usenza inzuzo kunye nelahleko. Nangona kunjalo, ngokuzivumela ubambe kakhulu ngexesha, amathuba okusula iakhawunti yakho yonke kwisigqibo esingalunganga esinye asezantsi kakhulu.
Kuzanywe kwavavanywa Amaqhinga eNtengiso ye Forex
Asikwazanga ukuxoxa ngokuthengisa kwimarike ye-forex ngaphandle kokuthetha ngamaqhinga. Nje ukuba ukubambe kakuhle ukusebenza ngaphakathi kworhwebo lwe-forex- okt uza kuthengisa njani kwaye ubeke njani iodolo- uya kufuna ukucinga malunga neenjongo zakho zorhwebo kunye nesicwangciso oza kusisebenzisa, ubuncinci ukuqala nge.
Ukuya kurhwebo ngesicwangciso-qhinga kuya kukunceda uhlale ngokuthe tye kwaye umncinci kwaye kuya kwenza ukuba wenze izigqibo ezingasekelwanga kwiimvakalelo zakho. Sidibanise uluhlu lwezinto ezisetyenziswa rhoqo izicwangciso zorhwebo esetyenziswa kwimarike ye-forex kwihlabathi liphela.
Ukuthengiswa kwemini ye Forex
Abantu aba urhwebo usuku I-forex ithambekele ekugcineni indawo yorhwebo ivulekile ingaphantsi kosuku (kungoko igama). Oku kunokuthetha ukuvala indawo ngaphakathi kwemizuzu, okanye iiyure.
Ukuthengisa kwemini kuhlala kubandakanya ukuvula kunye nokuvala ukuthengisa okuninzi ngosuku olunye, zihlala zisebenzisa amandla. Ngelixa izibonelelo zincinci, zinentengiselwano emininzi, iingeniso azifiki kodwa zibaluleke kakhulu- rhoqo. Aba barhwebi badlula kwimirhumo yokufumana imali ngobusuku (esiza kuyigubungela kamva).
Forex scalping ayisiyiyo indlela elula yokuthengisa i-forex. Akulula kangako ukuba nobuchule njengezinye izicwangciso, zihlala zisetyenziswa kuphela ngabarhwebi abanamava. Injongo apha kukuxhamla kumaxabiso amancinci aguqukayo ngosuku lokuthengisa.
Oku kunokubandakanya ukubeka iimfumba zeodolo ngaphakathi komcimbi weeyure. Njengoko igama lisitsho, aba barhwebi ulusu Ukuzuza okuncinci ngalo lonke ixesha isibini se-forex sitshintsha ngaphakathi kuluhlu oluthile.
I-Scalping isacingelwa ukuba sisicwangciso sobungozi obunobungozi, ngakumbi ukuba sisetyenzisiwe ecaleni koku kuchazwe ngasentla Thatha inzuzo kwaye stop-ilahleko imiyalelo. Incinci njengoko inokubonakala, ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, ezi nzuzo zinokongeza kwiveki ephumelelayo yokurhweba ngaphandle kwexesha.
Ukurhweba nge-Forex Swing
Ukuba ungumqali emva koko unokufumana i-forex Ukuguqula ukurhweba ukhetho olusengqiqweni. Ngokucacileyo, ukurhweba ngokurhweba kulungile kubarhwebi bexesha elifutshane abakhetha ukurhweba kwimarike ye-forex ngokuguquguquka kancinci.
Abathengisi be-Swing bayakwazi ukugcina ukuthengisa kwabo kuvulekile usuku olunye okanye iiveki ezimbini, ngamanye amaxesha iinyanga ngexesha. Isizathu sokurhweba ngokurhweba ngokuguquguqukayo kukuba injongo kukulandela imeko yesibini osithengisayo, esinokuhlala iiyure ukuya kwiinyanga.
IiAkhawunti zeDemo ze-Forex
Iiakhawunti zeedemo akufuneki zitsalwe. Zisisixhobo esihle kakhulu sokurhweba kwangaphambili kwe-newbies kunye nabarhwebi abanamava ngokufanayo. Isizathu sokuba, inkampani ethengisa abathengi kwi-Intanethi inikezela abathengi ngeakhawunti yeedemo ikuvumela ukuba urhwebe kwimarike ye-forex ebonisa imeko yemali yokwenyani. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa uya kunikwa imali yamaphepha, njengemali yedemo.
Oku kuthetha ukuba ungaqhelanisa nesicwangciso esitsha sokurhweba nge-forex de umxholo wentliziyo yakho, okanye unokufunda nje iintambo zentengiso ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Sebenzisa iiMpawu kunye neeNkqubo zeMarike zeMarike eziZenzekelayo
Sitshilo ngaphambili ukuba kukho iindlela ezimfutshane, oko kukuthi, kwabo bangekaqondi uhlalutyo lobuchwephesha kunye neetshathi zamaxabiso ezenziwa kukurhweba kwangaphambili. Okanye mhlawumbi uswele nje ixesha kunye nokuzinikezela okufunekayo ukuze umelane ngokwaneleyo.
Kwimeko apho ungevanga ngezi zixhobo, kweli candelo siza kungena ngqo kwimiqondiso, ukuthengisa isipili kunye neerobhothi.
Ngale nto ithethwayo, masingene ngaphakathi.
Iimpawu zeNtengiso yeNtengiso ye Forex
Masiqale ngemiqondiso yokuthengisa. Ukubeka ngokulula, 'ziziphakamiso', okanye 'ezibangela' ngokusekwe kwiikhrayitheriya esekwe kwangaphambili ezinje ngevolthi yokunyuka njl.
Ngeyona ndlela ilula, umqondiso wakho wentengiso ye-forex uya kubandakanya olu lwazi lulandelayo:
Umqondiso wakho uya kubonisa ukuba kuya kufuneka ubeke i kuthenga order okanye thengisa order kunye nini
Okokugqibela, izakuquka okucetyiswayo stop-ilahleko kwaye Thatha inzuzo kwinqanaba
Konke okufuneka ukwenze emva koko beka ii-odolo ezicetyisiweyo kumthengisi wakho
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemiqondiso kwaye zikwenza ukuba urhwebe kwimarike ye-forex ngaphandle kokufunda uhlalutyo olusisiseko okanye lobuchwephesha ukuba awufuni.
Ukuba uyasithanda isandi sokurhweba ngokusebenzisa imiqondiso ye-forex, thina kwi-Learn 2 Trade siyaziwa kwesi sithuba. Sinikezela nge-3 x ngemiqondiso yasimahla ngeveki ukuze ufikelele kwinkonzo yethu. Nje ukuba wenze utshintsho kwinkonzo yethu yeprimiyamu (eza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30), uyakufumana phakathi kweempawu ezingama-3-5 ngosuku.
Unokufunda ngakumbi malunga ne- imiqondiso Forex Apha.
Ukurhweba ngezibuko forex Market
Eli luphawu oluhle olwenza ukuba abathengisi bakope ngumrhwebi onamava. Ngokwemigaqo yabantu, nayiphi na imali eyenzelwa urhwebo iya kubonakala kwipotifoliyo yakho yorhwebo.
Ukubeka ngokulula, ukuba uthatha isigqibo sokukopa umrhwebi ojolise kwi-forex kwaye afake i-0.4% yeepotifoliyo zabo kwi-AUD / USD kunye ne-0.3% kwi-GBP / USD-ke i-0.7% yeepotifoliyo yakho nayo inikezelwe kwezo zibini zibini.
Elinye lawona maqonga okurhweba ukuze ukope umrhwebi yi-eToro. Kukho iimfumba zabatyali mali abanokukhetha kuzo kunye nengxelo eqinisekisiweyo. Uya kuba nokufikelela kwizibalo zabo-ezinje ngembuyekezo, izibini ezikhethiweyo ze-forex, kunye nobungakanani obuphakathi bezorhwebo. Ungaqala ukukopa umrhwebi ukusuka kwi- $ 200 encinci eqongeni.
Iirobhothi ezizenzekelayo zoRhwebo kwi forex Market
Iirobhothi ezizenzekelayo ze-Forex zikwabizwa ngokuba zii-EAs (abacebisi ngeengcali). Ngamafutshane, iirobhothi ze-forex zikuvumela ukuba urhwebe ngendlela eyisiqhelo, ngaphandle kokuba irobhothi ikwenzela konke.
Masichaze ngokuqhubekayo-ngokungafaniyo nento esele ikhankanyiwe 'yomrhwebi' ayizukuba ngumntu obeka iiodolo. Endaweni yoko, isoftware ezenzekelayo ye-algorithmic iya kuskena iimarike ezifanelekileyo i-24/7 kwaye yenze ukuthenga nokuthengisa ii-odolo egameni lakho.
Ukuze sisebenze kakuhle, thina njengabantu sifuna ukulala kamnandi ebusuku, kwaye ezinye izinto zinokuchaphazela izakhono zethu zokwenza izigqibo. Kananjalo, ukunqongophala kwemvakalelo xa usebenzisa i-EA kunokuba yinto elungileyo kuphela. Enye ibhonasi Isoftware inokuqhuba iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Eyona ndlela yokusebenzisa i Forex robot njengenxalenye yesicwangciso sakho sokurhweba kukufumana umboneleli omthandayo kwaye ubhalise. Emva koko kufuneka ukhuphele isoftware kwaye uyilayishe kumboneleli weqela lesithathu njengeMetaTrader4.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuya kufuneka uqiniseke ukuba umrhwebi wakho uyahambelana nayo MT4 ngaphambi kokubhalisa. Ewe kunjalo, akusekho ziqinisekiso xa usebenzisa irobhothi ye forex. Unoko engqondweni, sicebisa ukuzama idemo ukuba ubone ukuba uyayithanda.
Uyifumana njani i-Intanethi eyiNtengiso efanelekileyo kwi-Intanethi
Ukuze uqale ngeentengiso zakho zentengiso ye-forex, kuya kufuneka kuqala uzifumanele umrhwebi olungileyo. Njengoko sichukumisile, kukho amakhulu abonelela ngenkonzo enkulu, eminye ayilunganga kangako-ke kunokuba nzima ukubona ihlathi lemithi.
Ukuthatha oko kuthathelwa ingqalelo, siqokelele uluhlu lweemetrikhi eziphambili ukujongana nazo xa ukhangela umthengisi we-forex efanelekileyo. Kukwabalulekile ukuba ube nokucinga okuhle malunga nokuba zeziphi iinjongo zakho zokurhweba, ezinokukunceda ubone ukuba yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kuwe.
Siyakholelwa ukuba ngokukhetha umrhwebi onelayisensi epheleleyo uyazikhusela kwiingozi zokuzimela yorhwebo ntengiso isithuba. Emva kwayo yonke loo nto, lishishini eliyingozi ukuhambisa imali yakho kwinkampani engenammiselo.
Ekupheleni kosuku, imibutho elawulayo efana ne-FCA (iGunya lokuZiphatha kwezeMali) kunye neCySEC (iCommerce Securities and Exchange Commission) zenzelwe ukugcina indawo yeenkonzo zezimali icocekile kwaye ilungile kubo bonke.
Ngokusebenzisa kuphela abathengisi abanamaphepha-mvume ngokwenene uyazibonelela ngokhuseleko oluninzi, kubandakanya nokukhuselwa kulwaphulo-mthetho lwezezimali kunye nokuphulukana nemali eyinkunzi ukuba umrhwebi angabinayo imali. Isizathu soku kukuba naliphi na iqonga lokuthengisa elisebenza nomzimba olawulayo lizahlulahlula imali yabathengi bayo.
Izibini zeFX ezikhoyo
Enye i-metric ebalulekileyo ekufuneka uyijongile xa ufumana i-broker efanelekileyo yeyakho yeyiphi i-forex yezibini ezifumanekayo zokuthengisa. Sele sigubungele izibini zemali ezithengisekayo kwimarike ye-forex. Nangona kunjalo, ngelixa kukho ngaphezulu kwe-100 + zezibini zangaphambili ezikhoyo, ayizizo zonke iindawo zokurhweba eziya kuba nakho ukukunika ukufikelela kwiimarike ezifanayo.
Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka usoloko ujonga into eza kubakho phambi kokuba uqhubeke kwaye ubhalise ngokupheleleyo. Umzekelo, yokanye unganqwenela ukuthengisa isibini esineemali zentengiso ezikhulayo ezinje nge-USD / MXN (idola yaseMelika / ipeso yaseMexico). Emva kwayo yonke loo nto, ayizizo zonke iindawo zokurhweba eziya kuthi zikwazi ukukunika izibini ezifanayo.
IiKhomishini kunye neMirhumo
Nangona kubonakala kucacile ukujonga umrhumo-kunokuba lula ukuqhutywa ngezithembiso zempumelelo yobusuku bonke kunye nenani elinomdla lezixhobo zemali ezikhoyo. Inyani yile, ukuba uza kuhlawuliswa i-10 yeedola ngumthengisi wakho kwisikhundla ngasinye osivulayo kwaye usivale- kuya kufuneka uyazi loo nto ukuze ukwazi ukuyibeka kwinzuzo yakho.
Iqonga lokurhweba yinkampani, kwaye ke kufuneka lenze imali ukuze lingasindi kuphela-kodwa likunike nenkonzo. Iindaba ezimnandi zezokuba kukho iimfumba zabarhwebi abakwi-Intanethi eziza kukubonelela ngokufikelela kwimarike ye-forex ngaphandle kwekhomishini.
Oku kuthetha ukuba endaweni yokuhlawula umrhumo wekhomishini kurhwebo ngalunye, okanye ipesenti yexabiso lakho le-odolo-uya kuhlawula ukusasazeka kunye nemirhumo yokufumana imali ubusuku bonke.
Iinketho zokuhlawula ezixhaswayo
Ngaphambi kokuba wenze ingqondo yakho xa isiza kukhetha umrhwebi, kuya kufuneka uyazi ukuba uza kuba nakho njani ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho yorhwebo.
Ukuze ufikelele kwimarike ye-forex yehlabathi, kuyakufuneka ubeke eyona mali ichaziweyo (yi-broker) kwiakhawunti yakho. Uninzi lweefemu zabarhwebi zamkela amakhadi etyala / okuthenga, ukuhanjiswa ngocingo kunye ezinye ii-wallets.
Nangona kunjalo, njengoko besitshilo, le iya kuba yinto ekufuneka uyijongile ngaphambi kokuba uye kude kakhulu kwinkqubo yophando. Kwakhona kufanelekile ukukhumbula ukuba nangona ukuhlawula ngokudlulisa ngocingo lwebhanki kuyinto eyaziwayo, kuthatha ixesha elide ukufikelela kwiakhawunti yakho (iintsuku ezi-2 okanye ezi-3 zokusebenza).
Abarhwebi abaPhambili beMarike ye-Forex ngoku
Ukuba uyenzile ukuza kuthi ga ngoku ngesikhokelo sethu malunga nendlela yokurhweba kwimarike ye-forex, ke amathuba okuba uziva umhle ukuba ucofe ulwazi malunga nendlela yokuqala ukhenketho lwakho lwemali.
Nangona kunjalo, njengoko besitshilo, okokuqala uza kudinga ukufumana umthengisi ukuze akunike ukufikelela kwimarike yemali yehlabathi. Kukho iimfumba zabarhwebi, ke ukuhlela phakathi kokulungileyo, okubi nokubi kunokuba ngumceli mngeni.
Ukukugcinela umsebenzi womlenze osekwe kwi-intanethi-sidibanise uluhlu lwabarhwebi bethu abaphambili be-5, abathethwe ngesandla kumawaka asebenzayo kwisithuba.
1. I-AVATrade - iiMarike zeCFDs zeNtengiso yeXabiso ngokuSasazeka okuQinisekileyo
I-AvaTrade ineentlobo ngeentlobo zeCFD ekunikezelweni kubandakanya isinyithi esifana negolide nesilivere, ii-cryptocurrencies kwaye kunjalo, i-forex. Ukunyuswa kwesibonelelo esivela kulo broker kufakwe kwi-1: 30 kubathengisi abathengisayo kwii-majors kunye ne-1: 20 kubantwana.
Njengomthengi, unokulindela ukusasazeka kokhuphiswano kunye neakhawunti yedemo yasimahla, kunye neemfumba zemali zamaphepha onokuziqhelanisa nazo. Nokuba ufuna ukuziqhelanisa nokuthengisa kwangaphambili ukusuka ekuqaleni, okanye zama nje isicwangciso esitsha. - oku kulungile.
Eli qonga lokurhweba linesixhobo salo esithandekayo esibizwa ngokuba yi 'AveTradeGo' egcwele izixhobo eziluncedo kwaye ikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise izibini ze-forex uhamba.
Ukuba ungumlandeli wothotho lweMetaTrader, i-AvaTrade igcwele iMT4 kunye neMT5 iyahambelana. Ungaqala ngalo broker ukusuka kwi- $ 100 nje.
Ukuxhamla kwiintengiso zangaphambili
2. I-Capital.com - iKhomishini yeNtengiso ye-Forex
I-Capital.com, njengabanye abarhwebi kuluhlu lwethu, ilawulwa ngokupheleleyo. Kule meko, ukhuselwe yimigaqo kunye nemigaqo yeCCA kunye neCCSEC, ebandakanya ukwahlulwa kwengxowa mali yabathengi kunye neendlela ezichasene nemali njengeKYC.
Lo mthengisi unika abathengi ithuba lokurhweba ngaphandle kwekhomishini kwi-plethora yee-asethi ezahlukeneyo. Izixhobo ze-CFD ezithengiswayo ziquka iimpahla, i-indices kwaye kunjalo - forex. Ukongeza kwi-commission-free yorhwebo, uyakwazi ukusebenzisa i-leverage kurhwebo lwakho lwe-forex ukuya kuthi ga kwi-1:30. Oku kuthetha ukuba isibonda se-100 yeedola sinokufikelela kwi-3,000 yeedola.
Xa kuziwa kwiindlela zokuhlawula, i-Capital.com akufuneki idanise. Indawo yamkela zonke iintlobo zotshintsho ngocingo (oluthatha iintsuku ezimbalwa) kumakhadi etyala / okutsala kunye ne-e-wallets njengeSkrill. Idipozithi yakho encinci yokuqalisa ukurhweba nge-forex ngalo mthengisi yi- $ 20 nje.
Ukurhweba kwangaphambili nge-zero-commission
Ukhetho lokuvula iAkhawunti kunye noMthengisi weNtengiso ye-Forex
Ukuvula iakhawunti ngeqonga lokuthengisa, ngakumbi abo bakuluhlu lwethu, kuhlala kulula kakhulu. Nangona kunjalo, egameni lesikhokelo esipheleleyo, sibeke ndawonye inyathelo eli-3 elilula lokufumana inkqubo yokubhalisa.
Vula iAkhawunti yeNtengiso ye-Forex
Into yokuqala yokuqala-kuya kufuneka uye entlokweni kwiwebhusayithi yomthengisi oyikhethileyo. Uhlala ubona iqhosha 'lokungena'. Cofa loo nto kwaye kuya kuvela ifom emfutshane.
Okwangoku, kuya kufuneka ufake igama lakho, inombolo yomnxeba, umhla wokuzalwa kunye nedilesi ye-imeyile. Uninzi lwamaqonga orhwebo alawulwayo aya kufuna isazisi esenziwe ngurhulumente njengephepha-mvume lakho lokuqhuba okanye ipaspoti. Oku kuqhelekile ngokugqibeleleyo, ngokwemithetho ye-KYC enyanzeliswa ngabanikezeli belayisensi yomthengisi.
Iimali zeDiphozithi kwiAkhawunti yakho ye Forex
Ngoku ukuba wenze iakhawunti kuyakufuneka uyixhase. Ngaphandle koko, awuyi kuba nayo nayiphi na into yokurhweba ngayo. Oku kuhlala kulula.
Faka idipozithi ubuncinci obufunekayo usebenzisa indlela yentlawulo oyikhethileyo (kwinto ekhoyo). Ungalibali, ukuba uthatha isigqibo sokufaka imali kwiakhawunti yakho usebenzisa ugqithiso ngocingo kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze ivele. Zive ukhululekile ngeli xesha ukuzama idemo, ukuba ikhona.
Beka urhwebo lwakho lokuqala lwe-Forex
Ngoku nonke nimiselwe ngeakhawunti exhaswa ngemali - ungaqala ukurhweba kwimarike ye-forex. Kufuneka ufumane i-FX yakho oyikhethileyo kwaye wenze iodolo.
Nantsi impinda ekhawulezileyo yendlela yokubeka iodolo yakho yokuqala:
Gqiba phakathi kuthenga or thengisa -Kuxhomekeke ekubeni ucinga ukuba ixabiso liyakuphakama okanye lihle
Beka i- umda Umyalelo /imarike umyalelo - faka kwixabiso elimiselweyo / uphumeze kwangoko
Faka isixa seStake - uzimisele ukubeka emngciphekweni malini?
Khetha okanye ngokuchasene nomgangatho - ukuba unqwenela ukusebenzisa ubungakanani, khetha uninzi kwizinto ezikhoyo
Misela Ukuyeka-ukulahleka / Thatha iNzuzo ii-odolo-sicebisa ukuba usebenzise le miyalelo ukulinganisa umngcipheko / umvuzo wakho kurhwebo
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, qinisekisa iodolo yakho ngeqonga lokuthengisa. Siyathemba ukuba urhwebo lwakho lokuqala kwimarike ye-forex luphumelele!
Ukuba ukutyeba okungcolileyo kwakulula, ngekhe kugcinelwe i-1% yabemi behlabathi! Nangona kunjalo, akukho bungozi ekuzameni ilungelo?
Akukho ndlela yokurhweba ngendlela engenamngcipheko. Nangona kunjalo, ngokulandela isikhokelo sethu kwaye ubuncinci uzama ukunciphisa umngcipheko-uya kuba uqala ngonyawo lwasekunene.
Ukurhweba kwimarike ye-forex kunokuba yindlela elungileyo yokwenza iinzuzo ezincinci rhoqo, kwaye kukho iindlela ezahlukeneyo ezinokuthengiswa. Sicinga ukuba ukusebenzisa iiodolo ezinje nge yeka-ilahleko kwaye Thatha inzuzo, umzekelo, unokunceda xa kufikwa ekubekeni ngokucacileyo ukungena kunye nokuphuma kweenjongo.
Sebenzisa ii-odolo kunye nezicwangciso, kunye nohlalutyo, yindlela evavanyiweyo yokugcina ulawulo malunga nendlela urhwebo lwakho olunokuhamba ngayo. Ukuba ufuna ukurhweba ngendlela engacacanga, kutheni ungazami ukuthengisa okanye irobhothi ye-forex? Ukuba awunalo ixesha lokufunda i-ins kunye nokuphuma kohlalutyo lobuchwephesha kunye nesiseko- ke ezi zixhobo zingangumhlobo osenyongweni womrhwebi.
Nawuphi na umrhwebi ogqiba ngaye, siyacebisa ukubambelela kulowo ubambe ilayisensi evela kumzimba olawulayo ofana ne-ASIC, FCA, okanye iCySEC.
Ayisiyokwazi nje kuphela ukuba ujongene nenkampani yokwenyani, kodwa uyazi ukuba iimali zakho zigcinwe kwiakhawunti eyahlukileyo kwinkampani yabarhwebi (ukuba inkampani iyahamba).
Ekugqibeleni, zama ukurhweba ngaphakathi kwemida yakho, ube nesicwangciso endaweni, kwaye ucinge ngeenjongo zakho zokurhweba ngokuchanekileyo.
Ndingathengisa njani kwimarike ye-forex?
Ukuze ufumane ukufikelela kwiimarike ze-forex, kufuneka ufumane umthengisi we-intanethi kwi-intanethi. Xa ufumana enye oyithandayo-bhalisa, faka imali kwiakhawunti yakho, kwaye ubeke iodolo kwisibini ofuna ukusithengisa. Umyalelo obekiweyo uya kuxhomekeka ekubeni ucinga ukuba ixabiso liya kunyuka okanye lihle.
Ndingazi njani ukuba umthengisi we-forex uvumelekile?
Ukujonga ilayisensi kwiwebhusayithi yayo sisiqalo esihle. Abathengisi beLegit bafaka izicelo kwimibutho elawulayo yokufumana iilayisensi kwaye babonisa ngebhongo inombolo yobhaliso. Aba bathengisi kufuneka balandele imigaqo kunye nemigaqo kubandakanya ukwahlulwa kwengxowa mali yabathengi. Amaqumrhu olawulo ahloniphekileyo abandakanya i-FCA, ASIC kunye neCySEC ukubiza ngambalwa.
Ngaba ndinokuziqhelisa ukurhweba kwimarike ye-forex?
Ewe xa usayina kunye nomthengisi onikezela abathengi ngeakhawunti yedemo, unokuziqhelanisa nokusebenzisa imali yephepha. Kananjalo, ungafikelela ngokuqinileyo kwimarike ye-forex ngaphandle kokubeka ipenisi esichengeni.
Ngaba ndingenza imali ndisebenzisa iirobhothi zangaphambili?
Unokwenza imali usebenzisa iirobhothi zangaphambili, nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba uyakwenza njalo. Iimali zokurhweba zigcwele umngcipheko- yiyo loo nto kubalulekile ukuba uzifundise kwimarike ngaphambi kokuntywila. Usebenzisa imiqondiso, iiakhawunti zedemo kunye nesicwangciso-qhinga kuya kukunceda kuphela.
Ngawaphi amaqonga okurhweba ngokufikelela kwimarike ye-forex?
Ngokombono wethu othobekileyo, abathengisi ababalaseleyo kwisithuba se-intanethi sokurhweba i-forex yiSkilling, iCapital.com, kunye ne-eToro. I-AvaTrade kunye ne-EuropeFX nazo kufanelekile ukuba ziphonononge. Ukuba unesibini esithile onomdla kuso kwaye uhlala ujonga iqonga lokurhweba onokukunika ukufikelela kolo rhwebo.